Juuska, jidhka iyo jilicsanaanta miraha si tartiib ah u socda | Abuurista khadka tooska ah
Ka nadiifi tixraacyada miraha faro badan leh wax jinsi iyo jidh ahaaneed. Awoodda muujinta muuqaalka ah ee muuskan, strawberries, fersken iyo miraha kale ay leeyihiin waa tixraaca fiidiyowga xayeysiinta ah ee Swisse Me abuuray.
Soo jeedin xiiso leh iyo taas kuma qabanayo cagaha la beddelayTan iyo mid kasta oo ka mid ah miraha ka muuqda fiidiyowga, oo lagu daray falalkaas faraha ama aan lahayn, ayaa ka sii cad. Hab cad oo lagu muujiyo rabitaanka jidhka iyo sida jidhkeennu ula falgeli karo iyaga.
Markuu miraha ka buuxo cabitaanno iyo cabitaanno, Swisse ayaa cinwaan uga dhigtay fiidiyowgan FOODPORN ama (Cuntada Luuqada). Kaalay, tixraacyadu way ka cad yihiin muuqaal fiidiyoow soo saara gaajo badan oo mirahaas leh iyo cayaarahaas oo lagu daray dhammaan hilibka ku jira cadaadiska ay wadaan faraha xirfadlayaasha ah
Dhaqdhaqaaq qunyar socod ah oo aad markhaati ka noqon karto mid kasta oo ka mid ah faahfaahintaan si hadhow maskaxdeenna ugu jira dareenka hoose iyo maqaarka maqaarka. Iftiin diiradda saaraya meelaha saxda ah, Swisse Me wuxuu u abuuray xayeysiin xiiso leh Mark & ​​Spencer taasna hubaal cidna ugama tagi doonto cid aan dan ka lahayn; ugu yaraan dhankeenna sidaas ayuu ahaa.
Xaqiiqdii xayeysiintan kaliya waxaa la arki karaa laga bilaabo sagaal habeenimo tixraacyada muuqda ee damiir ahaanta jirka iyo dareenka ka dhasha mirahaas strawberry-ga ah ama casiirkaas oo ka dhasha in faraha si wanaagsan loo tuujiyo. Markay cunnadu noqoto tan ugu dareenka iyo kacsiga leh sawiradaas daandaansiga ah.
que ha ilaawin naqshada waayo koob la siiyay filimada sanadka sida laga soo xigtay Pornhub, laakiin qayb kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Marka miraha dhaqdhaqaaqa gaabis ahi ay jidhka ka falceliyaan xayeysiintan Swisse Me
Bastarrika sawirada cajiibka ah ee ciidda oo umuuqda xayawaan dhab ah